Aluminom Ladder, Aluminium Truck Box, Aluminium pallet - YSXF
Akwa Aluminium Akuku Akuku
Aluminom na-eto Mushrooms shelf
Buru Mushrooms Aluminom Alloy Platform
Aviation Aluminom Alloy ntụgharị Turdị
Aluminom Alloy Aeronautical Ngwaọrụ
Aluminom Alloy Mobile Trolley
Aluminom Alloy Mobile Platform
Aluminom Alloy Ngwá Ọrụ
Aluminom Alloy Profaịlụ
Aluminom Alloy pallet
Aluminium Alloy Ngwá Ọrụ Maka pesdị Ofdị iousdị Dị iche iche
Aluminom Alloy Platen
Ewu Machinery Industry Aluminium Ngwaahịa
Aluminom Alloy Nche
Aluminom Alloy n'ọkwá
Ngwaahịa Aluminom Ngwaahịa Friji
Anyị na-enye nnukwu ngwaahịa ngwaahịa
Ezubere igbe igbe MaxxHaul Trailer anyị maka ịrịgo na ndị na-adọkpụ ya na etiti A-Ire iji nyekwuo nchekwa maka ngwaọrụ gị, ngwa ọgụ ụlọikwuu, agbụ nchekwa, eriri, mkpuchi ụgbọ ala, akụrụngwa dị n'èzí, eriri, ngwa ngwa, eriri, mgbatị ụkwụ na ọtụtụ ndị ọzọ. . Echefula ngwa ọrụ ma ọ bụ gia mgbe ịchọrọ ha! - Mere site na ihe siri ike na nke na-eguzogide ọgwụ na-eguzogide ọkụ na-adị arọ aluminom na ngwongwo nke ọma na akwa mkpuchi siri ike - platekpụrụ efere Diamond na-enye mgbakwunye stren ...
Ngwaọrụ Ngwongwo Turck
LIGHTWEight MFE UNTBỌR C NA --BỌ - A na-eji igbe ọrụ a siri ike ma dị mfe iji wuo igbe A-Frame style trailers. Dị mfe iji zukọta, dị mma iji si n'otu ebe gaa ebe ọzọ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Nnukwu ihe iji chekwaa ngwaọrụ gị ma ọ bụ ihe ndị dị na ụgbọala gị ma gbakwunye ohere nchekwa na ebe ụgbọala na-adọkpụ. EGO DIAMOND DUAMOND RUGGED Design - Wuru ya nke alumini na-adighi nma ya na ntaneti ya nile, maka iji ike. Ngwaọrụ nchekwa ga-echebe ...
Okwu Mmalite China bụ onye na-ebupụ ngwaahịa na mmiri nke ụwa, ọ bụkwa ebe a na-edozi ngwaahịa mmiri. Ugbu a Main Market, ọtụtụ n'ime oyi kpọnwụrụ ihe eji bụ plastic, igwe anaghị agba nchara, kpaliri board na on.They nwere ogbenye kwes conductivity, elu oriri ike, mfe imebi, na mgbagwoju anya ọrụ usoro. Ejiri akwa aluminom mepụta ihe a. Ọ nwere uru nke ogologo ndụ ọrụ, ezi okpomọkụ nyefe na quic ...
Nkọwapụta Ngwaahịa Arọ Portable Car Aluminium oldkpakọba Ubube ọlaọcha, Black ma ọ bụ dị ka rịọrọ Style ahaziri Size Ahaziri Mkpa ọgwụgwọ Non / Oxidation Njirimara High ike, corrosion eguzogide, Light arọ Products Gosi
Aluminom alloy guardrail na-bụ-eji maka n'akụkụ nchebe nke gwongworo, trailers, na injinịa ugbo ala, nke na-arụ ọrụ nke nchebe, rịa, na ịma mma; aluminum alloy guardrail nwere ìhè arọ, ezi kwụsie ike, elu ọxịdashọn na-eguzogide, nchara na-eguzogide, mma, na ibu-amị Na rigidity nwekwara ike izute ọkọlọtọ chọrọ; udi na size nwekwara ike ahaziri dị ka ndị ahịa mkpa. Ngwaahịa Gosi
Aluminium efe n'elu-arụ ọrụ Platform
Nkwupụta ngwaahịa A na-arụ ọrụ ikpo okwu dị elu nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara ma mepụtara ya.Ọ na-arụ ọrụ teknụzụ site na ịkwalite ngwaahịa ụlọ.Ọ bụ nke aluminom profaịlụ welding na bolt fixing structure. O nwere ihe na-eri ihe na ala, nke ga-eme ka akpịrị na-akpaghị aka mgbe ibu ahụ karịrị ibu nchekwa, na-emezi nchekwa nke ngwaahịa a. Ngwaahịa na-eburu ibu na-ebuli Aluminom Alloy Platform Agba Silver, Black ma ọ bụ dị ka achọrọ ...
Product Okwu Mmalite Nke a ngwaahịa bụ m ụlọ ọrụ nọọrọ onwe ha nnyocha na mmepe nke esịtidem r & d otu nke ọtọ ngwaahịa, otu nke nnukwu-ọnụ ọgụgụ iji na xugong otu, na ndị ọzọ na ụlọ ọrụ, meriwo ahịa obosara toro. Size na udi nwere ike gbanwee dị ka ụgbọ ala ngwaahịa, ebelata echichi nke ụfọdụ nsogbu nsogbu. Njirimara Ngwaahịa 1. Esịtidem na-eji ọtụtụ ihe ike, ma e jiri ya tụnyere ihe ndị ọzọ, zere nsogbu nke deformat ...
Okwu Mmalite Okwu Pallets na-akacha eji maka ntụgharị na nkwakọba ihe na lọjistik. Nchedo gburugburu ebe obibi, nchekwa nri na nsogbu ndị ọzọ abụrụla nke pụtara ìhè. Aluminiumalloy pallet, dị ka onye nnọchi nke pallets osisi, pallet plastik na nchara pallet, Ejiri ha mee ihe n'ọtụtụ mba ndị mepere emepe dịka Europe na America. Product Description Agba ọlaọcha, Black ma ọ bụ dị ka rịọrọ arọ 18-25kg / ngwaahia Size 1200 * 800 * 152/1200 * 1000 * 152/1219 * 1016 * 15 ...
Xuzhou Caixin Aluminium Ngwaahịa Co., Ltd. bụ onye na-emepụta ngwaahịa aluminom na ụlọ ọrụ nnwale dị njikere nke ọma na ike ọrụ ike. akụrụngwa, igwe dị arọ na ụgbọ ala, akụrụngwa anyanwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Anyị na ngwaahịa na-ebe ghọtara na tụkwasịrị obi site ọrụ na ike izute nọgidere na-agbanwe akụ na ụba na-elekọta mmadụ needs.We ịnabata ọhụrụ na ndị agadi ahịa si n'agbụrụ dị iche iche kpọtụrụ anyị maka ọdịnihu azụmahịa mmekọrịta na ibe ihe ịga nke ọma!
Kedu usoro ngwaahịa aluminom gafere site na akụrụngwa gaa nhazi na ịkpụzi?
Aluminium nkenke mgbatị nwere ike n'ime aluminom ngwaahịa. Agbanyeghị na akpịrịkpa na ụdị dị iche iche, etu haziri, ọmarịcha ọdịdị na ịkwụ ọtọ nwere ike ịbara ndị mmadụ na mmadụ uru, wee wulite agba dị iche maka ndụ. N'ime ndụ anyị, enwere ụlọ ọrụ nke alum ...
Aluminom Ngwá Ọrụ
Aluminom alloy toolbox bụ otu n’ime ngwaahịa aluminom igbe. Ọ bụ ụdị igbe nke aluminom alloy guzobere iji nweta ngwa nke ịtụkwasị ngwaọrụ yana ihe atụ. Dị iche na igbe ndị ọzọ, ngwa ọrụ a nwere aluminom alloy. Cha ...
Njirimara na ojiji nke ulo oru aluminom profaịlụ
Njirimara 1. Enwere nkọwa na nha dị iche iche, na oke nke akụkụ ogologo na akụkụ dị mkpụmkpụ bụ ọtụtụ. Iji maa atụ, 4040 anyị, 4080, 40120, 4040 anyị na-ahụkarị bụ akụkụ anọ, akụkụ anọ niile bụ 40mm, 4080 bụkwa akụkụ dị ogologo 80mm. Akụkụ dị mkpirikpi bụ 40mm, na lee ...
Nke 1, Lutai Industry Park, Fangcun Town, Tongshan District, Xuzhou, Jiangsu, China